Samy hafa ny Pallet sy Skid | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Samy hafa ny Pallet sy Skid | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Home / Business / Fitaterana & Logistics / Difference Teo anelanelan'ny Pallet sy Skid
Samy hafa ny Pallet sy Skid
2 Mey 2011 Narotsak'i koshal
Misy maha samy hafa ny pallet miavaka sy skid na dia mety ho nahita ny olona nijery izany fahasamihafana. Amin'ny ankapobeny, ny teny sy ny skid pallet dia ampiasaina mba hilazana ny sehatra izay manohana entana tao an-tranon'omby izy ireo raha mbola fomba feno, na ho entina alalan'ny Jack na forklift. Izy io dia fisaka ambonin'ny manazava izay mitombo sy ny fitehirizana fahombiazana. Tsy maintsy efa nahita entana ary na dia nandefa fitoeran ho foana hazo ireo faritra raha efa hatramin'izay ho nahafoy. Ny entana Matetika no antoka amin'ny tady rehefa nanohy pallets ireo. Na dia ny olona mampiasa ny teny pallet ka skid interchangeably, zarazaraina ho samy hafa eo amin'ny roa izay no hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity.
Inona no atao hoe Skid?
Ny skid dia iray Loading sehatra tokotanin-tsambo. Tsy manana ambany tokotanin-tsambo. Ny olona mifandray amin'ny orinasa fitaterana manondro azy ireo ho ambany ny mombamomba finday sehatra. Io tsy fisian'ny tokotanin-tsambo ny ambany dia mety ho olana ho an'ny fitaterana entana mavesatra. Wooden skids indraindray dia antsoina koa hoe sehatra. Skids Matetika no ampiasaina ho toy ny fototra ho an'ny mavesatra maharitra fitaovana rehefa manana ny tombony azo amin'ny maha finday. Tsy maharitra eo amin'ny natiora. Skids dia azo ampiasaina ho toy ny mora dikan-pallets rehefa misy fitaovana ilaina ny fitaterana sy ny fitaovana avy amin'ny mpanamboatra.
Araka ny tantara dia ataovy hoe, skids no nampiasaina tany amin'ny ady lehibe 2 mba hamindra ny entana be dia be. Izany no azo atao, satria toy ny skids tsy manana ambany tokotanin-tsambo, dia mety ho mora nisintona amin'ny alalan'ny fasika. Koa satria ny fampidirana ny avo roa heny mihatsaravelatsihy pallet tamin'ny 1930, ny fangatahana skids Lasa nidina.
Inona no atao hoe Pallet?
A pallet, tsy tahaka ny skid, sady manana ny ambony sy ny ambany tokotanin-tsambo. Izany dia manome azy mihoatra noho ny skid filaminana. Na ny ankamaroan'ny pallets dia hazo, izy ireo koa dia natao amin'ny plastika ary na dia vy . Misy ireo mpomba sy mpanohitra ny fitaovana rehetra ampiasaina amin'ny fanorenana ny pallets. Ohatra, rehefa tonga amin'ny toerana azo antoka olana, hazo ratsy pallets manana isa ambony. Rehefa afaka mahatakatra, hazo maranitra pallets afaka manana sisiny, splinters, sy harafesina fantsika. Samy fiarovana olana. Na izany aza, dia tsy pallets plastika avy amin'ny fiarovana toy izany olana.
Ny fampiasana pallets nitombo noho ny containerization ho madio sy mahitsy ny fitoeran bottoms fanampiana amin'ny mora pallet hetsika. Koa satria mora pallets fanampiana amin'ny hetsika sy ny Loading sy mampidina entana avy ny nandefa kaontenera, isan-taona antsasaky ny tapitrisa pallets vaovao natao. Misy mihoatra ny 2 lavitrisa pallets nampiasaina ao Etazonia amin'izao fotoana izao. Pallets dia afaka mitondra ny enta-mavesatra ny momba ny 1000kg ary azo mora foana rehefa narahiny ny tenin'i forklift kamiao iray.
Inona no maha samy hafa ny Pallet sy Skid?
Pallet sy skid dia ampiasaina mba hilazana ny sehatra izay manohana entana tao an-tranon'omby izy ireo raha mbola fomba feno, na ho entina alalan'ny Jack na forklift.
• A skid dia iray Loading sehatra tokotanin-tsambo. Tsy manana ambany tokotanin-tsambo.
• A pallet, tsy tahaka ny skid, sady manana ny ambony sy ny ambany tokotanin-tsambo.
• Ny pallet dia azo antoka kokoa noho ny skid.
• Pallets kokoa amin'ny fangatahana noho ny skids.
• Pallets dia malaza kokoa noho ny avo roa heny tokotanin-tsambo. Araka ny hitanao, ny tokotanin-tsambo roa sosona mamela ny forklift mba hahazo tsara mafy ny pallet. Amin'izay, ny zavatra eo amin'ny pallet azo nentina tsy misy olana. Na izany aza, raha ny amin'ny skid, noho ny tsy fisian'ny iray ambany tokotanin-tsambo izany dia tsy azo atao. Azo antoka, dia ilaina rehefa nitarika zavatra, nefa tsy toy ny mora sy azo antoka toy ny fitaterana entana amin'ny pallet.
Pallet ny Dbenben N ( CC BY-SA 3.0 )
Fahasamihafana eo amin'ny entana sy ny entana Fahasamihafana eo amin'ny Courier sy ny entana Fahasamihafana eo amin'ny kaody Universal Product (UPC) sy ny Unit Keeping Unit (SKU) Fahasamihafana eo amin'ny fitantanana lojika sy famahanana Fahasamihafana eo amin'ny Fividianana sy ny fividianana
Filed Under: Transport & Logistics Tagged With: Palet , famaritana pallet , sehatra , Skid , Skid ary Pallet , famaritana skid , Skid vs Pallet , fampiasana paleta , skid hazo
Momba ny mpanoratra: koshal
Koshal dia nahazo diplaoma tamin'ny fianarana amin'ny fiteny miaraka amin'ny mari-pahaizana Master amin'ny Linguistics
Hoy i Eric dia Amin'ny
Misaotra anao. Vao nanomboka niasa tany amin'ny toerana vaovao sy ny trano fanatobiana entana, ary izany dia namaly ny fanontaniana tsara.
Fahasamihafana eo amin'ny sarintany sy ny tabilao
Fahasamihafana eo amin'ny fanjakana sy ny dingana amin'ny raharaha
Fahasamihafana eo amin'ny Chutney sy ny relish
Fahasamihafana eo amin'i Nikon D3100 sy D5000
Fahasamihafana eo amin'ny hatezerana sy ny fankahalana